Amandla oMntu ngaphakathi Martech Zone
Amandla oMntu ngaphakathi
NgoLwesithathu, Aprili 25, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, besinentlanganiso kunye nebhodi eCisco nge Umnxeba kwaye kwakungekho nto imfutshane ngokumangalisayo. Ukuthetha nomntu ubungakanani obupheleleyo kunye nokujongana ubuso ngobuso kunexabiso elimangalisayo. Abantu baseCisco bayavuma kwaye bayikhupha le nto infographic kumandla eentlanganiso zomntu.
Ibango lendawo yentengiso esasazwe jikelele itshintshe indlela imibutho enxibelelana ngayo noogxa, umthengisi / amaqabane kunye nabathengi abanokwahlulwa yimigama emide. Uvavanyo lwehlabathi oluqhutywa yi-The Economist Intelligence Unit, oluxhaswe yiCisco, luvavanye iimvakalelo zeenkokheli zeshishini ezingama-862 malunga Ixabiso leentlanganiso zomntu kunye nefuthe lazo ngaphezulu kweenkqubo zeshishini ezingama-30. Ke, sithini isigwebo? Ngaba unxibelelwano lomntu lunamandla njengoko sicinga njalo?
I-infographic imele iziphumo ezivela kwi- Uvavanyo olwenziwe liZiko loBuntlola lezoQoqosho, Ixhaswe yiCisco, eyavavanya iinkokeli zeshishini ezingama-862 malunga nexabiso leentlanganiso zomntu kunye nefuthe lazo kwiinkqubo zeshishini ezingaphezu kwama-30.
tags: ciscouqhagamshelwanongobusoIiVidiyo zeNtengisoTechnologyuboniso lwetshiphu emsebenzi
I-imeyile yokujonga kunye nePinterest: Fakela uKhuphiswano lwakho lwebhokisi engenayo
Epreli 25, 2012 ngo-8: 14 PM
Inqaku elihle uDoug! Esi sesona sizathu andinakuze ndiwayeke amantombazana e-cookies:).
Olu luvo lukwanxibelelana neentsika ezi-4 zobugqi zikaGuy Kawasaki. Emntwini unamandla, kodwa kufuneka uthandeke, uthembeke, wohluke, njl.